West Seattle - Flip Your Trip - so Archives - Seattle Traffic
Category: West Seattle – Flip Your Trip – so
Gaadiidka Carruurta da’doodu tahay 5 iyo wixii ka hooseeya waa u bilaash inay raacaan. Dhammaan dhalinyarada da’doodu tahay 6 – 18 waxay u qalmaan qiimo dhimis qoto dheer iyagoo isticmaalaya kaararka Dhalanyarada ee ORCA. Dhammaan ardayda dugsiyada dhexe iyo sare ee Seattle waxay u qalmaan isticmaalka bilaashka ah ee aan xad lahayn ee ORCA Opportunity […]
Galbeedka Seattle Barnaamijka Xulashada Safarka Waa maxay hadafyada ugu muhiimsan ee Barnaamijka Xulashada safarka ee Buundada Galbeedka Seattle? Fududeeyo saamaynta taraafikada ee xidhidhiyaha buundada galbeedka Seattle iyadoo la yareynayo baabuurka hal qof wado ee soo galka iyo ka baxa Galbeedka Seattle. Dhiirrigeli, taageer, oo kordhi isticmaalka fursadaha gaadiidka gudaha iyo dibadda iyo hareeraha Galbeedka magaalada […]